Sandesh Prawahढल्यो एमालेको लालकिल्ला : नेकपा एमालेको सिंगो कमिटीनै माओवादी केन्द्रमा प्रवेश ! - Sandesh Prawah
ढल्यो एमालेको लालकिल्ला : नेकपा एमालेको सिंगो कमिटीनै माओवादी केन्द्रमा प्रवेश !
भेलामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ । एकता कार्यदलका संयोजकमा नेकपा एमालेबाट बुलबहादुर केसी रहेका छन् भने, सदस्यहरुमा एमालेबाट चिन्त नेपाली, टंक कार्की र यामबहादुर बस्नेत रहेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट चन्द्र दत्त रेग्मी, मनोज पुन, जीतबहादुर केसी, प्रेमबहादुर कुवँर, रामबहादुर कुवँर रहेका छन्।